Tom And Jerry Shoot Balloons - Online
နေအိမ် » shooting » Tom And Jerry Shoot Balloons
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Tom And Jerry Shoot Balloons
ဖေါ်ပြချက်: ဂျယ်ရီတစ်ဦးကောင်းကင်တမန်သည်, သူသည်ပျံသန်းနှင့်အသုံးပြုပူဖောင်းများရိုက်ကူးဖို့လေး, သူ့ကိုတတ်နိုင်သမျှအများအပြားပူဖောင်းများရိုက်ကူးကူညီပေးနိုင်သည်။
ကစား: 34,262 tag ကို: တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီအားကစားပြိုင်ပွဲ, တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီ, ဒစ္စနေးဂိမ်း, Jerry ဂိမ်း, Tom ဂိမ်း
Tom နှင့် Jerry လမ်းလျှောက်အိမ်သူအိမ်သား
ဂျယ်ရီကဤအိမျတျော၌တွမ်ကိုကူညီရှာဖွေ, သင်လမ်း, ဂျယ်ရီ drop နိုင်သေးငယ်လွန်းသောကြောင့်သတိပြုရကြမည်, ရွှေ့ဖို့နဲ့ arrow key ကို အသုံးပြု. လမ်းတော်၌ကျင်လည်ရန်ဂျယ်ရီကိုထိန်းချုပ်။
အွန်လိုင်း Teddy Bear Zombies လက်ပစ်ဗုံး HTML5 ဂိမ်း Play ။
က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ: က Galaxy ၏ Citadel ကိုမုန်တိုင်းအံ့ဩခြင်းရဲ့အုပ်ထိန်းသူများ
the Guardians နန်းတော်မှတဆင့်သူတို့၏လမ်းကိုတိုက်ကိုကူညီပါ။
ben10 diamondhead ရိုက်ကူး
အခမဲ့ Ben10 ဂိမ်း Play - Diamondhead အွန်လိုင်း Shoot ။ သင်၏မိတ်ဆွေများကိုဤဂိမ်းမျှဝေပါ။
ဖရုံသီးတပ်များရန်သင့်မြှားပစ်စွမ်းရည်များနှင့်အထူးစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပါ! , ကိုကလစ်နှိပ်ပါကိုင်နှင့်မြှားပစ်မှလွှတ်ပေးရန်။
gumball ပီဇာ-pocalypse ၏အံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာ
လာရီကိုရှာပါနဲ့ပီဇာ-pocalypse အတွက်ကမ္ဘာပျက်ရပ်တန့်။ လာရီသည်သူ၏အလုပ်အကိုင်အားလုံးနုတ်ထွက်တဲ့အခါ, Elmore ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ပရမ်းပတာသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ အခုတော့သူ့ကိုနောက်ကျောကိုရောက်စေဖို့ Gumball, ဒါဝင်, Anais နဲ့ Richard အထိပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးသူတို့ scave ၏ဂိုဏ်းတိုက်ဖျက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်
Batman em တက်ရိုက်ကူး
Batman Em Up ကို Shoot: Batman Shoot Em Up ကိုအကောင်းဆုံးအအွန်လိုင်းကာတွန်းပစ်ခတ်မှုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒီဂိမ်း6အံ့သြဖွယ်အဆင့်ရှိပါတယ်သင်သည်လုံလောက်တဲ့သတ္တိ, ပြီးတော့ Batman ၏ပန်ကာဟာသူ့ရဲ့အချိန်အကူအညီနဲ့ Batman လျှင်, သင့်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါငျးတို့သညျရနျသူတို့ကိုသတ်ပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်, သင်ကဒါအီးသည်ထင်ပါသလား
ben 10 စက်ရုပ်တပ်မတော်
ဘင် 10 ရိုက်ကူးအားလုံးစက်ရုပ်ကိုကူညီပါသည်, လမ်းရှိလူရိုက်ကူးအားလုံးအဆင့်ကိုကူးသွားနှင့်ပစ္စည်းများစုဆောင်းကြပါဘူး။
အာဏာကို Rangers ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကယ်တင်
ဧဒုံ Ranger, ယာသုန်ရိုက်ကူးအားလုံးသူတို့ကိုအားဖြင့်အားလုံးရန်သူဖျက်ဆီးဖို့တစ်မစ်ရှင်ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုကိုဖကျြဆီးအားလုံးမြင်ကွင်းများအားဖြင့်ဒီမစ်ရှင်ပြီးစီးခြင်းကိုကူညီပါ။
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, Doraemon နှင့် Nobita အားလုံးငါးဖမ်းကာကွယ်ဖို့သမုဒ်ဒရာအပေါင်းတို့၌နဂါးရိုက်ကူးဖို့ရှိသည်။ သူတို့ကိုပစ်သတ်ဖို့, အာကာသ bar ကိုရွှေ့ဖို့အဓိကသော့ချက် Down, အသုံး Up ကိုဖွငျ့ဤမစ်ရှင်ပြီးစီးခြင်းကိုကူညီပါ။
ရှင်သန်မှု၏ Batman စစ်တိုက်
ဒီမစ်ရှင်၌, Batman အာဏာကိုတိုးမြှင့်ဖို့လက်နက်နှင့်ပစ္စည်းများစုဆောင်းဖို့သတိရအပေါင်းတို့, ရန်သူရိုက်ကူးဖို့အာကာသယာဉ်ကိုမောင်း။ ကံကောင်းပါစေ!
အ Simpson ကူး
Bart Simpson ကနူးရှိပါတယ်, သူသည်သင်တို့အကြောင်း, နှင့်မြစ်အတွက်အတားအဆီးရှောင်သူခိုးကိုရိုက်ကူးဖို့ mouse ကိုသုံးသူခိုးဖမ်းရန်ကနူးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါတို့မွို့, များစွာသောဂြိုလ်သားတိုက်ခိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုခုနှစ်တွင်က Superman ငါတို့မွို့ကယ်တင်ရန်အားလုံးတပါးရိုက်ကူးဖို့မစ်ရှင်ရှိသည်။ သူ့ကိုအားလုံးတပါးကိုသတ်သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးကိုကူညီပါ။
Doraemon နှင့် Nobita မြောက်ဘက်သို့ဝင်ရိုးစွန်းမှာနှစ်သစ်အားလပ်ရက်ရှိပါတယ်, သူတို့ရေခဲနှင့်အတူရိုက်ကူးကစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Doraemon Nobita ရိုက်ကူးနှင့်ရမှတ်များအရကိုကူညီပါ။
Angry Birds ဂိမ်းရီယိုအွန်လိုင်း
ကမ္ဘာ့အလူကြိုက်များဂိမ်း Angry Bird ကိုထိတ်လန် လာ. Real flash ကိုဗားရှင်း
အမျက်ထွက် Bird ကိုတန်ပြန်
သူတို့ကိုအဖေ-ပေါက်ကွဲမှုဝက်နောက်တဖန်ပြန် လာ. ! 'revenge.Angry ငှက်သည်အတောငျ့နှင့်အတူမီးရှို့ကြ၏သူတို့ရဲ့နှလုံးအပြည့်အဝက၎င်း၏ရာထူးများ၏အန္တရာယ်ခံစားခဲ့ရ, butit ၎င်း၏ပျက်စီးခြင်းစောင့်ဆိုင်းဘယ်တော့မှကလက်နက်အဖြစ်ခန်ဓာကိုယ်ကိုသုံးခြင်းနှင့်ရန်သူတစ်ဦးတန်ပြန်ကိုဖွင်ဒါပေမယ့်တတ်နိုင်သမျှ t ကိုသင်မပါဘဲအနိုင်ရ
Angry Birds ဂိမ်း Cannon 3
Valentine Day ကိုများအတွက်အမျိုးသမီးငှက်အထီးငှက်တို့သည်စိုကျပ။
Angry Birds ဂိမ်း Cannon 4
အစိမ်းရောင်ခွေးဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့အမြောက်များနှင့်အတူ Angry Birds ဂိမ်း, ရိုက်ကူး။
SpongeBob M ကမျက်နှာဖုံး
ရေကူးဝတ်စုံနဲ့အောက်ဆုံးနိုင်ငံသားကြယ် gank အားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ကြသည်! SpongeBob ကိုကယ်တင်နှင့်ပြန် save အိမ်သူအိမ်သား (krusty krab) မှသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်!
အမျက်ထွက် Zombies 2
အမျက်ထွက်ဖုတ်ကောင်တိုက်ခိုက်မှုမှသင်၏အိမ်ခေါင်မိုး proctect ဖို့မြန်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ရိုက်ကူး!
ပါဝါ Rangers ပါဝါရိုက်
ပါဝါ Rangers ပါဝါရိုက်ကူး Play, ကောင်းတစ်ဦးနံနက်စာရှိသည်နှင့်အကောငျး Bakeries ဖို့နဂါးရိုက်ကူးကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းကိုကူညီပါ
Angry Birds ဂိမ်းအာကာသအွန်လိုင်း
ဤသည်ကိုသူတို့ရှိသမျှသည်မကောင်းဝက်ပြပ်ယူရှိသည်, Angry Birds ဂိမ်း၏နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါသည်။
ကြက်သား Ice Cream စားပါ
Long ကရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့လှပတဲ့မြက်ခင်းပြင်၌အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြက်၏အုပ်စုတစုရှိပါတယ်အသက်ရှင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်, သူတို့ကရေခဲမုန့်များအတွက်ဖန်စီရှိသည်, သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်ရေခဲမုန့်အမျိုးမျိုးရှိခြင်း၏အိပ်မက်မက်သူတို့သည်ကြက်တိုင်းဘုရားတဘို့ဆန္ဒရှိ eat.So နိုင်ထက်ပိုပြီး နေ့, နောက်ဆုံး, အ
ဒိန်ခဲရဖို့, တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီဒီအချိန်အတူတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ထိုအမြောက်များ၏ထောင့်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအလွန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။